Afur loo sameeyay Askar Mareykan ah. - Wargeyska Faafiye
Afur loo sameeyay Askar Mareykan ah.
Wasaaradda difaaca ee Mareykanka (Bentigon) ayaa sidii sanad kasta caadada u aheyd munaasabad afur ah ugu sameesay magaalada Washinton Askarteeda kuwa muslimka ah , iyadoo ku qadarinaysa bisha barakeysan ee Ramadaanka Kariimka.
Afurkaa kadib, waxaa halkaa ka hadlay Wasiirka Difaaca Mareykanka Ashton B. Carter, wuuuna munaasabadaa shahaaddo sharafeed howlakrinimo ee sugidda amniga Mareykanka ah. ku guddoonsiyay qaar ka mid ah kumanaanka Askarta Mareykanka ee Muslimiinta ah, kuwaa oo ay ku muteysteen sida naf hurnimada leh oo ay waddankooda ugu adeegeen.
Ashton B. Carter, wuxuu kaloo munaasabadaa ka sheegay, in xafladda afurka ay u sameeyeen Ciidamadooda Muslimka ah, micnaheedu uu yahay mid quwad iyo niyad cusub ku abuuraraysa safafka Ciidamada Mareykanka meel kasta ay joogaanba, siiba kuwa aaminsan diinta Islaamka.
Filed in: .Warka, Editorial
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsShabaab oo eedeynaysa Turkiga.AMISOM & SNA discover drugs, alcohol in al Shabaab hideout.Create buffer zone along Kenya and Somalia borderBalcad: Dad is qarxin rabay oo la qabtay.Wariye toogasho lagu dilay: Muqdisho